Faallo: Maxaa la gudboon Cali Cabdullahi Cosoble? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Faallo: Maxaa la gudboon Cali Cabdullahi Cosoble?
Faallo: Maxaa la gudboon Cali Cabdullahi Cosoble?
Madaxwaynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cabdullahi Cosoble
Muqdisho Xaqiiqa Times——-Khilaafka ka dhex taagan hay’adda Sharci dajinta Hirshabelle iyo hogaamiyaha maamulkaasi ayaad mooddaa inay markan u gudubtay golaha fulinta ee maamulkaasi.
Xildhibaanada Hirshabelle, ayaa dhowaan go’aan dhaliyay muran badan qaatay ka dib markii shir warbaahinta iyo gudoonka Sare ee baarlamaanka maamulka ay dibad joog ka ahaayeen ay Ku yeesheen Jowhar, kaasi oo ahaa in xildhibaanada ay kalsoonida kala laabateen madaxwaynaha Hirshabelle.
Ku dhowaad 70 mudane oo joog ka ahaa 68 ka mid ah ayaa la sheegay inay u codeeyeen in Cali Cabdullahi Cosoble xafiiska baneeyo.
Shirkaasi waxa shir gudoomiyay gudoomiye Ku xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle, inkastoo maalin ka dib gudoomiyaha laftiisa uu taageeray xil ka qaadista madaxwaynaha.
Madaxwaynaha Hirshabelle ayaa markii xilka laga qaaday Sacado yar un ka dib gaaray Jowhar, isagoo sheegay in go’anka xildhibaanada uu ahaa mid baadil Ku dhisan.
Xildhibaano isaga taageerayay ayaa ayaguna sheegay in ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka.
Dad badan oo sharciga iyo siyaasadda ka faalooda ayaa sheegaya in arinta ka taagan Jowhar ay tahay mid saamayn wayn leh islamarkaana aan indhaha laga qabsan Karin.
Waxaa siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood waliba kuwo haatan Ku jira dowladda dhexe ay sheegayaan in xilka qaadista madaxwaynaha Hirshabelle ay tahay mid aan sharci ahayn, inkastoo kuwo kale oo uu ka mid yahay xildhibaan Jeesow ay taageereen xilka qaadista Cosoble, sheegayna inay tahay mid loo maray nadaam iyo wado sharci ah.
Waa maxay sababta keentay xilka qaadista?
Xildhibaanada Hirshabelle iyo mas’uuliyiin Sare oo maamulka ka tirsan oo gudoonka baarlamaanka uu ka mid yahay ay sheegeen in Mr.Cosoble, uu Ku fashilmay inuu guto waajibadkii dastuuriga ahaa ee isaga loo igmaday.
Waxaa la sheegay in madaxwaynaha Hirshabelle labo habeen oo isku xigta uusan seexan Magaalada Jowhar oo ah xarunta maamulka uu haatan ka howl galayo.
Waxaa la sheegay in maamulka oo 10 bilood jirsaday uu xitaa jirin Wasiir leh xafiis loogu hagaago.
Waxaa sidoo kale xildhibaanada maamulka ay Ku eedeeyeen in uu dagay Magaalada Muqdisho, isagoo iska iloobay waajibka ka saaran maamulka.
Ma sharcibaa xilka qaadista Cosoble?
Xildhibaanada Hirshabelle intooda badan ayaa sheegaya in si sharci ah madaxwaynaha xilka looga qaday loona baahan yahay in xafiiska uu baneeyo.
Xildhibaanada taagersan madaxwaynaha ayaa Ku doodaya in madaxwaynaha xilka aan laga qaadin uuna yahay madaxwaynaha rasmiga ah ee sharciga Ku yimid iyo waliba doorasho xalaal ah.
Waxaa intaas dheer in golaha wasiirada ay maanta taageereen xilka qaadista madaxwaynaha Hirshabelle ayagoo soo saaray qadobo ay ka mid yihiin….
1)- Goluhu waxa uu ayiday go’aankii dastuuriga ahaa ee xilka loogaga qaaday Madaxweynihii hore ee Hirshabele Cali Cabdulaahi Cosoble.
2)- Goluhu waxa uu ugu baaqay dowlada federalka iyo beesha caalamka in la raaco lana taageero goaanka ay gaareen baarlamaanka 14ka bishan.
3)- Goluhu waxa uu isku raacay in loo diyaargaroobo doorashada Madaxweyaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle.
Eedaynta dowladda Dhexe
Madaxwaynaha Hirshabelle Cali Cabdullahi, oo maanta shir jaraa’iid Ku qabtay Magaalada Jowhar ayaad moodda in culays wayn uu Ku sii kordhay, waxaana uu bilaabay rag iska dhicis, isaga oo sheegay in dowladda dhexe ay ka dambayso arinta ka taagan Jowhar.
Waxaa uu sheegay in dowladda federal-ka ah ee Soomaaliya ay maamulka dhexdiisa ka bilowday shirqool siyaasadeed oo isaga ka dhan ah.
Cali C/llaahi Cosoble ayaa ku jira oo aad moodo inuu ku jiro rafasho siyaasadeed tii u dambeysay ayaa waxaa uu ku eedeeyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre inuu kaalin weyn ka qaadanayo sida uu yiri ‘bur burinta Maamulka Hirshabeelle’
Waxaa uu sheegay in 5-tii bilood ee la soo dhafaay Ra’iisul was a are Khayre oo isaga u dhigayay wax uu ugu yeeray ‘Dabin siyaasadeed’ isla markaana uu xayiray dhaqaalihii Hirshabelle ka heli jirtay dowladda dhexe.
“Anaga daacad ayaan iska aheyn runtii laakiin Ninka la leeyahay Kheyre waxa uu maleegayay bur burinta maamulkani, Hirshabelle adiga ma dhisin waa jireysaa, adaa meesha ka baxaya oo siyaasadda si fudud ku soo galay, lacagta Kheyre uu ka xayiray Maamulka bilooyinkii ugu dambeeyay ayuu hadda rabaa in uu u soo fasaxo oo lagu dumiyo Maamulkani Xildhibaanadana lagu kala fur furo ha ogaadaan Beesha Caalamka Waxa ay wado Xukuumadda Federaalka” ayuu yiri Mr. Cosoble.
Cali Cabdullahi Cosoble, waxaa loo arkaa haatan siyaasi mudo dheer Ku jiray hurdo, taasi oo aan lagu baran siyaasiyiinta Soomaaliya.
Doorka dowladda dhexe
Dowladda federal-ka ah ee Soomaaliya gaar ahaan golaha fulinta yaanan arintan ka hadlin.
Hase ahaatee inaysan ka hadlin ayaa ka dhigan mid ah ‘Sadar muuqda su’aal ka dhan’. Waxaa aan sidaa u leeyahay ayaa waxaa ay tahay inta aan qorayay maqaalkan waxaa isoo gaaray war ah in Xukuumadda ay wafdi heer sare ah ay u dirtay Magaalada Jowhar.
Wafdigan oo u muuqda kuwo Jowhar u tagay in xal laga gaaro khilaafka Hirshabelle, ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Farax Juxa, wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Isloow, Wasiirka Waxbarashada iyo xildhibaano deegaanka ah.
Waxaa macquul ah inay Ku qasbaan Cali Cabdullahi Cosoble, inuu iscasilo maadaama arintu ay haatan taagan tahay ‘ IJIID AAN KU JEEDO.
Haatan waxaa uu u muuqdaa mid Ku jira riyo siyaasadeed oo ay adag tahay inay rumowdo.
Malaga yaabaa inuu badbaado mise waxaa laga yaabaa inuu iscasilo.
Previous articleGolaha Wasiirada Hirshabelle oo ayiday go’aankii xilka looga qaaday Madaxwaynaha(Sawiro)
Next articleFaahfaahin: Weerar lagu dilay 13 qof oo ka dhacay Barcelona (Sawiro)